Cookistry: Culinary Worlds of Snacks and Sushi Collide: Leading Innovator Hissho Sushi joins forces with Frito-Lay to unveil first-ever Cheetos® Flamin' Hot® Sushi Roll - Hissho Sushi
နိုဝင်ဘာ 11, 2020 သတင်း
ချက်ပြုတ်ခြင်း - အစားအစာနှင့်ဆူရှီအချက်အပြုတ်ကမ္ဘာများတိုက်မိခြင်း - ထိပ်တန်းဆန်းသစ်တီထွင်သူ Hissho Sushi သည် Frito-Lay နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပထမ ဦး ဆုံးCheetos® Flamin 'Hot® Sushi Roll
Article Originally Published on Cookistry, မူရင်းကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Pepsico အားဖြင့်, Hissho ဆူရှီ
Hissho ၏အထူးလေ့ကျင့်ထားသောဆူရှီစားဖိုမှူးများက Spicy Krab၊ ဖိနှိပ်ခံရသည့် Cheetos Flamin ၏ပူပြင်းသောရေခဲမုန့်များနှင့်မီးခိုးမြူများနှင့်ရေနံစိုစွတ်သော Cheetos Flamin 'Hot roll ကိုပြုလုပ်သည့်အခါဖောက်သည်များသည်အပူရှိန်အလျင်အမြန်ခံစားရမည်။ ထောပတ်သီး၊ ခရင်မ်နှင့်သခွားသီးများပါ ၀ င်သည်။ By: PepsiCo, Hissho ဆူရှီ
Charlotte, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Nov. 11, 2020 /PRNewswire/ — For the first time in its history, industry leader Hissho Sushi is joining forces with the maker of Americas’s favorite snack foods, Frito-Lay, to unveilanew, never-tasted-before sushi roll – the Cheetos® Flamin’ Hot® Roll.
With growing opportunities surrounding prepared foods, and increased competition to offer more inventive and convenient grab and go options, Hissho and Frito-Lay’s innovative chefs came together to buildacreation that thinks outside the roll! The flavor-packed Cheetos® Flamin’ Hot® Sushi Roll အထင်ကရအမေရိကန်ရေစာနှင့်ဂျပန်ရိုးရာနှင့်အတူကတွဲ။
Cheetos သည် FTP-Lay မြောက်အမေရိက၊ PTPI ကုမ္ပဏီ၏ ၁.၂၀ ဘီလီယံအဆင်ပြေသောအစားအစာဌာနခွဲဖြစ်သော PepsiCo, Inc (Nasdaq: ပြည်သူ့လွှတ်တော်နယူးယော့ခ် (Purchase, NY) တွင်အခြေစိုက်သည်။ Frito-Lay အကြောင်းကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လေ့လာပါ၊ http://www.fritolay.com/, အ Snack Chat ဘလော့ဂ်, http://www.snacks.com/ နှင့်တွစ်တာပေါ်မှာ http://www.twitter.com/fritolay.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင် PepsiCo ထုတ်ကုန်များသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ် ၁ ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲသူများနှစ်သက်ကြသည်။ PepsiCo သည် Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker နှင့် Tropicana တို့ပါ ၀ င်သည့်ဖြည့်စွက်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာအစုရှယ်ယာများမှတဆင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁ ဒသမ ၂၂ ဘီလျံဘီလီယံအသားတင်အမြတ်ငွေရရှိခဲ့သည်။ PepsiCo ၏ထုတ်ကုန်အစုစုတွင်နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းခြေလက်လီရောင်းချမှုတွင် ၁TP2T1 ဘီလီယံကျော်ထုတ်လုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၂၂ ခုအပါအ ၀ င်ပျော်စရာအစားအစာများနှင့်အဖျော်ယမကာအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ PepsiCo ကိုလမ်းညွှန်ခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခြင်းဖြင့်အဆင်ပြေသောအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ “ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခြင်း” သည်စျေးကွက်တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်နှင့်စီးပွားရေး၏ရှုထောင့်အားလုံးတွင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထည့်သွင်းရန်ရည်မှန်းချက်ကိုထင်ဟပ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှု www.pepsico.com.
သီဟ အချက်အပြုတ် Flamin ပူ စားနပ်ရိက္ခာစက်မှုလုပ်ငန်း လတ်ဆတ်သော Frito-Lay ကုန်စုံ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှု ကျန်းမာသောအစားအစာ Hissho ကျန်းမာရေး hissho ဆူရှီ တာ ၀ န်ယူမှုရှိ လက်လီ ပင်လယ်စာ စူပါမားကတ် ဆူရှီ
Penn Live: Hissho Sushi unveils new mashup - the Cheetos Flamin’ Hot Roll